Gudigii gacanta ku hayay baaristii shilkii diyaradeed ee ay ku dhinteen saraakiishii amniga Kenya oo dalbaday cadaymo. | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Gudigii gacanta ku hayay baaristii shilkii diyaradeed ee ay ku dhinteen saraakiishii amniga Kenya oo dalbaday cadaymo.
Published on July 12, 2012 by Sacdiya Garabey · No Comments
Share12.July.2012:- Gudiga baaraya Sababtii dhalisay burburkii diyaradeed ee ay ku geeriyoodeen Wasiirkii Amniga Qaranka Prof George Saitoti, Ku xigeenkiisii Orwa ojode iyo 4 ruux oo kale, ayaa ka dalbaday cid waliba oo haysa macluumaad ku aadan burburkii diyaarada in ay gudiga hor timaado.
Garsooraha hugaaminaya gudigaani Kalpana Rawal ayaa sheegtay in Macluumaad waliba oo ay dadka soo gudbiyaan qaab baarid ah loo isticmaali doono.
Gudiga baaraya burburkii diyaarada Mas’uuliyiintu ku dhinteen ayaa horaan ugu yeeray qubara dhanka banbaanooyinka ah oo sambal ka qaaday burburka diyaarada.
Gudigaani oo ka kooban 13 xubnood ayaa baaraya sababta dhalisay burburka diyaarada ee ay ku geeriyoodeen Wasiirkii Amniga qaranka iyo ku xigeenkiisii .
10-kii bishii June ee aynu soo dhaafanay ayay aheed Markii diyaardaan Helacopterka ah isla markaana ay la socdeen Masuuliyiinta kula buburtay Kaynta Ngoog Mana cada ilaa iyo hada sababta dhalisay.
Ms Amina ...	Madaxwayne Kenyatta oo digniin u diray burcada danbiyada gaysata	May 20, 2013 Madaxwayne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowlada ay wax waliba oo karaankeeda ah samayn doonto si loola dagaalamo ...	Dowlada : safarkii Madaxwayne ku xigeenka qarash badan kuma bixin	May 20, 2013 Dowlada ayaa beenisay in safarka uu madxwayna ku xigeenka ku marayo qaar ka mid ah wadamaada africa ay ...	Sports	Falcao ” Warka Mustaqbalkeyga Laga Sheegey Waa Been Abuur ”.	May 18, 2013 Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Radamel Falcaoayaa beeniyay in uu wax ka og yahay in ay jiraan wadahaadlo uu ...	Seedorf Oo Loo Badinayo Inow Tababara Ka Noqdo Kooxda AC Milan	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa dhawaan sheegay in tababare Massimiliano Allegri uu ka tagayo kooxda isla markaana ...	Tababarahii Hore Ee Kooxda AC Milan Massimiliano Allegri oo U Wareegay Kooxda Roma	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa tibaaxay in tababaraha kooxda Massimiliano Allegri uu u wareegayo kooxda Roma marka ...	David Moyes Kulanka So Socoto Maxoy Samedonaa ?? Maxadna Ku Qiyaasi Karta ?	May 18, 2013 Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United, David Moyes ayaa diyaar u ah in uu bilaabo shaqada kooxda United ...	Xidiga Barcelona Andres Iniesta Oo Aan Ku Faraxsaneyn La Joogitanka Kooxdaasi	May 18, 2013 Ninka labaad ee ugu wanaagsan kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in uusan ku faraxsaneyn xiligan Barcelona .